Roja rakatiza nemari yemba
You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»Roja rakatiza nemari yemba
By Munyori weKwayedza on	 March 2, 2018 · NHAU DZEKUMATARE
ROJA rekutiza pamba paraigara risina kubhadhara chikwereti chemari yerendi rakazoigochera pahutsi apo muridzi wemba akakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tsvakayi Taranhike akamhan’arira Nyaradzo Makuhwa, uyo aimbova muroja wake, kuHarare Civil Court achida mari yake yemba yaainge atiza asina kubhadhara.
Taranhike anoti Makuhwa akatiza nemari yake yemba yemwedzi yakawanda. “Changamire, amai ava vaigara pamba pangu uye vakatiza nemari yangu yavakange vave nemwedzi yakawanda vasingabhadhare. Ndakazongowana atiza nemari iyi asina kana kuoneka. Mari yangu i$150 uye vaibhadhara $40 pamwedzi,” anodaro Taranhike.
Makuhwa anotsinhira kuti ane chikwereti chaTaranhike asi anoti mari yaari kutaura yakawandisa.
“Ini handirambe, ehe mari yavo ndinayo asi yavataura yakawanda nekuti gogo ndaibhadhara chikwereti chavo chemagetsi. Ndinofunga mari yavo yandinayo i$60 kana $70, handisi kunyatsoziva hangu,” anodaro.
Taranhike anoti Makuhwa aiva netsika yekumborega kubhadhara rendi mimwe mwedzi.
“Anonyepa mukadzi uyu, aiva netsika yekucharika mimwe mwedzi ozobhadhara pava paya. Mari iyi ndiye akatoinyora kuti i$150 ini handigone kunyora saka ndaiti maroja angu ese anyore mari dzangu dzavanenge vanadzo.
“Asi kana ati ndiyo yaanayo, ngaandipe kana dhora ndinotambira nekuti ndanzwa nekufamba, makumbo haachada aya,” anodaro.
Mutongi Nyasha Marufu akati Makuhwa abhadhare $70 yechikwereti chemba yaTaranhike musi wa28 Kukadzi 2018 usati wadarika.